विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै गृहमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी, मन्त्रिपरिषदबाट को-को हुदैछन आउट ? — Sanchar Kendra
विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै गृहमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी, मन्त्रिपरिषदबाट को-को हुदैछन आउट ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। सबै मन्त्रीलाई एकवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिएर ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका हुन्। यस विषयमा प्रधामन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले विगत दुई दिनयता विभिन्न चरणमा छलफल जारी राखेका छन्।
मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि ‘सफ्टवेयर’ नै विकास गरेर त्यसमार्फत सबै काम नियाल्दै मूल्यांकन गरिरहेका ओलीले लगानी सम्मेलनपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले जानकारी दिए। लगानी सम्मेलन चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ।
गत वर्ष ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले मन्त्रिमण्डललाई करिब एक महिनामा पूर्णता दिएका थिए। ‘लगानी सम्मेलन नजिकिएको छ, पार्टीभित्रको संगठनात्मक एकताको काम पनि टुंगिँदैछ।
त्यसपछि मनित्रमण्डल पुनर्गठन हुन्छ,’ ती सल्लाहकारले भने। मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको जानकारी दिँदै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानीका क्षेत्र स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो। पार्टीको संगठनात्मक एकता, नेताहरूको कार्य विभाजनलगायतको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र पार्टी संगठनात्मक एकताको काम प्याकेजमै टुंग्याउने गरी छलफल चलेको छ।
लगानी सम्मेलन र पार्टी एकताको काम नसकी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पार्टीभित्र नयाँ विवाद र अप्ठ्यारा आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी दुई कार्यसूची सम्पन्न गर्नेबित्तिकै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने ती सल्लाहकारको भनाइ छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उक्त मन्त्रालय अहिले राज्यमन्त्रीको भरमा छ। उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने, अहिलेको क्याबिनेटमा रहेर कार्यक्षमता देखाउन नसकेका मन्त्री हटाउने, नयाँ मन्त्री थप्ने र केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले तयारी थालेका हुन्। छलफलसँगै मन्त्रीका लागि दौडधुपमा सांसदहरु जुट्नेछन्। बिदाइ हुन नपरोस् भन्दै केही मन्त्रीले आफूले एक वर्षमा गरेका कायको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँग पनि त्यस विषयमा लामै छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले विराटनगर पुगेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने जानकारी दिएका छन्। ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा म अध्ययन गरिरहेको छु र काम पनि नियालिरहेको छु। हामीबीच सामान्य छलफल गरेर त्यसको निधो गर्नेछाैं। तर अहिले हतार छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै दाहालले भने। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार औपचारिक छलफल भएको दाहालले बताए।
‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसरी हिसाब गर्नुभएको छ, त्यसमा भर पर्छ। हामी प्रधानमन्त्री प्रणालीमै छांै। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ, त्यसैमा भर पर्छ,’ दाहालले भने, ‘तर मैले यस विषयमा तपार्इंले नै निर्णय गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको छु। तपाईंकै मूल्यांकनमा भर पर्ने र अधिकार क्षेत्र पनि तपाईंकै हो भनेर भनेको छु।’
यस विषयमा ओली–दाहालबीच सोमबार पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान एक चरण छलफल गरेका ओली–दाहालले मंगलबार भने बिहान र साँझ दुई चरणमा छलफल गरेका हुन्। दुई दिनभित्र पार्टी एकताको अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने गरी छलफल केन्द्रित भएको नेताहरूको भनाइ छ। ‘पार्टी एकतालाई अन्तिम रूप दिने प्रस्तावमा छलफलमा छौं। एकदुई दिनभित्र हामी प्रस्ताव तयार पारिसक्छौं,’ दाहालले भने। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदवाट को-को हुँदैछन् आउट ?
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार ओलीले बढीमा तीन जना नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी गरेका छन् भने केही मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर हुने देखिएको छ । नयाँ मन्त्रीमा जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमान्डर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र सुरेन्द्र पाण्डेका नाममा सहमति भइसकेको छ । तर अन्य एकको नाम भने अझै टुंगो लागिनसकेको स्रोतले बतायो ।
नयाँ तीन मन्त्री थपिने भएपछि वर्तमान तीन मन्त्री विदा हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ । कुनै अबरोध नभए विदा हुनेको सूचिमा भौतिक योजनामन्त्री रघुविर महासेठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालको नाम रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि विदा दिने पक्षमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका छन् । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले परिणाम निकाल्न केही समय मागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनसाय फेरिएको छ । खतिवडालाई एउटा मौका दिन सोचमा उनी पुगेका छन् ।
रिक्त रहेका मन्त्रालयमै नयाँ मन्त्रीको पदपुर्ति भने नगरिने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । लगभग आधाभन्दा बढि मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी नेकपाका दुई अध्यक्षले गरेका छन् ।
मन्त्रीको हेरफेरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा पर्ने लगभग निश्चित छ । गृहमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई ल्याउने दुई अध्यक्षबीच सहमति भइसकेको छ भने सुरेन्द्र पाण्डेका बिषयमा मन्त्रालय टुंगीसकेको छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने पाण्डेलाई अर्थमन्त्री नै बनाउन चाहेका छन् । अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली डा. खतिवडालाई नै अहिलेलाई जिम्मा दिने पक्षमा छन् ।
भौतिक मन्त्रालयको जिम्मा रामबहादुर थापालाई दिने तयारी गरिएको छ भने पर्यटनमन्त्रीको जिम्मा गोकुल बास्कोटालाई दिने तयारी गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालयमा प्रदीप ज्ञवालीले पनि दावी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंको मेयरमा बालेनलाई जिताएर मतदाताले हामीलाई बदलिन सन्देश दिए: महामन्त्री शर्मा
‘निर्वाचनमा बुथ कब्जा गरियो, बम पड्काइयो, उम्मेदवारहरूलाई थुनियो’